भिभोको ‘वाई थर्टी’ नेपाली बजारमा
शनिवार, आश्विन ३, २०७७ १०:५१:०७ युनिकोड
बुधवार, असार २४, २०७७ रौतहट अनलाइन न्युजडेस्क
काठमाडौं : भिभोले मंगलबार नेपालमा आफ्नो नयाँ फोन वाई थर्टी मोडल सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा यो फोन दुई मोडल भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसमध्ये चार जीबी र्याम प्लस ६४ जीबी स्टोरेजको फोनको मूल्य २४ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ भने चार जीबी र्याम प्लस १२८ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य २७ हजार ९९९ रहेको छ ।
यो फोनमा पाँच हजार एमएएचको शक्तिशाली ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ । क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा पछाडि भागमा चारवटा क्यामेरा रहेका छन् । जसमा १३ मेगापिक्सल, ८ मेगापिक्सेल र २/२ मेगापिक्सेलका क्यामेरा रहेका छन् ।
यी चारवटै क्यामेरामा एआई सपोर्ट रहेको कम्पनीको दाबी छ । यस्तै यसको अगाडि भागमा आठ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ । यो फोनमा सेक्युरिटीका लागि रियर फिंगरप्रिन्ट र फेस रिकग्निसन रहेको छ ।
भिभो वाई थर्टीको स्क्रीनको माथिल्लो कुनामा सानो पञ्च होल क्यामेरा रहेको छ । ६.४७ इञ्चको डिस्प्ले रहेको यो फोनमा १५६० बाई ७२० पिक्सेलको एचडी प्लस रेजोलुसन रहेको छ ।
फोनको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्दा यसमा अक्टा कोर मिडियाटेक हेलियो पी थर्टी फाइभ (एमटी ६७६५) प्रोसेसर चिप रहेको छ । बजेट सेग्मेन्टको यो फोनलाई आई भ्यू डिस्प्ले, एआई क्वाड क्यामेरा र पाँच हजार एमएएचको शक्तिशाली ब्याट्री ब्याकअपले यो फोनलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, असार २४, २०७७, ०९:०३:००
महत्वपूर्ण सामान हराएको अत्यन्तै जरुरी सुचना !!! भेटाउनेलाई पचास हजार पुरस्कार !
यी ७ कुराबाट थाहा हुन्छ तपाईं प्रेम परे–नपरेको
यस्ता छन् विश्वका निकै अप्ठेरो र खतरनाक स्थल (फोटोफिचर)
९९ प्रतिशत मानिसले गर्छन् दैनिक यस्ता गल्ती, गल्ती गरेको महसुस समेत गर्दैन
लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ५ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय सोमवार, भदौ २९, २०७७ 96